MOETHIHAAUNG: “ဘုရားဖြိုတဲ့ မင်းအစိုးရ…… မိုးကြိုးပစ်ချပါစေသတည်း”
“ဘုရားဖြိုတဲ့ မင်းအစိုးရ…… မိုးကြိုးပစ်ချပါစေသတည်း”
လယ်တီသိမ်တော် ဖြိုဖျက်ရန် ကလီကမာ လုပ်ခဲ့သော အစိုးရအပေါ်ရေးသားထားသော သတင်းအချက်လက်များအတွက် တာဝန်ယူနိုင်ပါသည်……..(ဂိုလ်ရှယ်လေး)
“အသေ၀နာ စ ဗာလာနံ
ပူဇာ စ ပူဇာနေယျာနံ” (လယ်တီဆရာတော်) ကပင် ထပ်မံ ပြုစာထားသော ဆုံးမစကားဖြစ်လေ၏။
ဗာလာနံ ဆိုတဲ့လူမိုက်တိုကို ကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာနေနိုင်ခြင်း၊ လုံးဝ အပေါင်းအသင်းမလုပ်ခြင်း ၊ ပညာရှိသူတို့ကို မှီဝဲဆည်းကပ် ယုံကြည် ကြည်ညိုခြင်း၊ ပူဇော်ထိုက်သောသူ၊ ချီးမြင့်မြှောက်စားထိုက်သူတို့ကို ပူဇော်ခြင်း၊ ချီးမြှင့်မြှောက်စားခြင်းသည် မင်္ဂလာမည်ပါပေသည်ဟု ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က အခိုင်မာ ဟောကြားခဲ့၏။
ဗုဒ္ဓဘုရားကိုယ်တိုင်ပင် လူမိုက်ပေါင်းများစွာအား ချွတ်တော်မူခဲ့လေသည် သို့သော် လူမိုက်အားလုံးကျွတ်တန်း မ၀င်ခဲ့ကြသည်မှာလည်း အများပင် ရှိခဲလေသည်။
ထို့အပြင် ဗုဒ္ဓဘုရားသခင် သက်တော် အထင်ရှားရှိစဉ်ကပင် ဘုရားရှင်ထံအား မိမိမြင်မက်သော အိမ်မက် တို့အား ပြန်လည် အနက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ွှ့ဆိုပေးရန် လျောက်တော်တင်သော ကောသလမင်း ၏ ပထမဆုံးသော မြင်မက်သည့် အိမ်မက်က အောက်ပါအတိုင်းဆိုလေသည်။
ကောသလမင်းအိပ်မက်(၁၆ ချက်)မှ အချက် (၁) ဖြစ်သည့် ပထမဆုံး မြင်မက်သော အိမ်မက်မှာ…
“အရှင်းဘု ရား အဖိုးတသိန်းထိုက်သော စန္ဒကူးနှစ်ကို ရက်တတ်ပုပ် ရည်ဖြင့် လည်းးစာသည်ဟု ထူးဆန်းစွာ မြင်မက်ပါသည်ဘုရား “ဟု လျှောက်၏။
“မင်းကြီး ငါဘုရား၏ သာသနာတော် ဆုတ် ယုတ်ချိန်တွင် ပစ္စည်းလာတ်လာဘများကို မျော်လင့်၍ တရားဒေသနာများကိုဟောကြားပေလိမ့်မည်။ အသာပြာမက်သော ရဟန်းပျက်များသည် လမ်းဆုံ လမ်းခွ လမ်း မတို၌ ကျပ် ပြား မူးမတ် စသောအသာပြာများကိုမက်၍ ဟောကြားပေလိမ့်မည်။ အဖိုးတသိန်းထိုက်သော စန္ဒကူးနှစ်ကို ရက်တက် ရည် တို့နှင့် လဲစား၊ ရာင်းစားသကဲ့သို တန်ဖိုးရှိသော ငါဘုရား၏တရားဒေသနာများကိုလည်း ပစ္စည်းလေးပါးလာတ်လာဘကိုမျော်လင့်၍ ဟော ကြားကြပေလိမ့် မယ်” ဟူ၍ မိန့်တော်မူသည်။
ယခု လယ်တီသိမ်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းတွင် ထွန်းတောက် ထင်ရှားခဲ့လေသော လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သာသနာဂုဏ်အား မဖြစ်စလောက်ကြေးနီပိသာဖြင့် ဦးပိုင်နှင့် လက်ရှိအစိုးရ ဦးသိန်းစိန် နှင့် မဟာ သံဃ နာယက တို့ လဲစား ရောင်းစား ဖြိုဖျက်လေတော့မည်။
သာသနာ ဦးဆောင် ဆရာတော်ကြီးများအား မည်သို့ လဒ်လာဘများ ပူဇော်လှူတန်းသည်ကို စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး နှင့် သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ မိမိကိုယ်ကို မိမိ အသိဆုံး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
လက်ပံတောင်းကြေးနီးမိုင်းတွင်း ၀န်းကျင်မှ ဖြစ်ခဲ့လေသော သာသနာ အမွေခံ ဘုရားသားတော်များအား မီးလောင်ဗုံးဖြင့် ပစ်ခွင်း ရှင်းခဲ့လေသော နိုင်ငံတော်မှ အကြမ်းဖက်ခဲ့သည် နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်မှုသည်ကား အလွန်ထင်ရှားလွန်းပြီး အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုအတွက် အများပြည်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပင်မက နိုင်ငံတကာမှ ဘာသာခြားများကပင် ဂရုနာသက်ခြင်း ဖြစ်ရကာ အရေးယူရန်တောင်းဆိုသော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အရေးပေါ် လုပ်အားပေး ပေါ်တာခေါ်ကာ ခုခံကာကွယ်သော နည်းလမ်းဗျူဟာတခု ကျင့်သုံးခဲ့သည်မှာ ထင်ထင်ရှားရှားရှိခဲ့လေသည်။
ထိုကြောင့် အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှု သည် လက်ပံတောင်းတွင် နိုင်ငံတော်မှ ကြူးလွန်သော အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရာကာ ၄င်းအကြမ်းဖက်ခြင်း၏ အနာဆာ ကိုလည်း ရှာမတွေလေအောင် သို့မဟုတ် ထိုးပြစရာ အမှတ်သားတခုခုမှပင် ကျန်ရစ်နေခြင်းမဖြစ်ရအောင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်မှ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သို့ တင်ပြထားသော စာကို စာရေးသူ မိတ္တူရရှိခဲ့သည့်အပြင် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးထံသို့ လက်ပံတောင်း ရာဇ၀တ်မှုအား ပပျောက်သွားစေရန် အစရှာ မတွေအောင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး (၆) ကြိမ်တိတိ တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးခဲ့လေသည်။
ဦးသားအေး (စစ်ကိုင်းတိုင်း) ၀န်ကြီးချုပ်တင်ပြလာသော ဆွေးနွေးလာသော အကြောင်းချင်းရာများနှင့် ရှေ့ဆက် လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်ရန် နည်းလမ်းများအား နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ၊ တပ်မတော် အရာရှိကြီးဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်ဝေလွင် ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ထိုအချိန်တွင် တပြိုင်တည်း တညီတညာတည်း ဖြစ်ခဲ့သည်ကို စာရေးသူအား လက်ရှိ အစိုးရမှငြင်းဆိုလျှင် အထောက်ထားများဖြင့် ဆက်လက် ဖေါ်ထုတ်တင်ပြပေးရပါလိမ့်မည်။
၄င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ လက်ပံတောင်းဒေသ လက်တီသိမ်တော်နှင့် ဆက်ဆပ်ဝန်းကျင်အားလုံးအား အနေထားတခုအရ ပျောက်ပြက်ရွေ့လျားသွားရန် ဖြစ်ပြီး အချိန်ယူပြီး လုပ်ဆောင် ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့လေသည်။ ယခု ၄င်းတို့၏ အစီမံအတိုင်း ကြူးလွန်ခဲ့ဘူးသော ရာဇ၀တ်မှုကြီးအား ပပျောက်ရန်အပြင် ၀မ်ပေါင်နှင့် သဘောတူထားသော လုပ်ငန်းသဘောတူညီချက်များကိုပါ အကောင်ထည်ဖေါ်ပြီးသားဖြစ်လေအောင် ကျွဲကူးရေပါ စကားရပ်နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ကြောင်း မြင်နိုင်ပါသည်။
၀မ်ပေါင် ကုမ္မဏီမှ တရုတ်နိုင်ငံ ဘရင်ကျင်း မြို့ ဘုရင်ကျင်း ယာဉ်ကျေးမှု တက္ကသိုလ်မှ ပေါမောက္ခ ချီယန်လူ အား လက်ပံတောင်း စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များအားသွားရောက်၍ တင်ပြကာ အကြံဥာဏ်တောင်းခဲ့လေသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာပင် အဆိုပါ ပါမောက္ခမှ လက်ပံတောင်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း မဖြစ်မနေ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ ဥပဒေမဟုတ်ကြောင်းနှင့် မိမိတို့၏ သဘောတူ ထားချက် အရအတိုင်းဆက်လက် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လိုက လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း အဖြေထုတ်ပေးခဲ့လေသည်။
သို့တင်မက လယ်တီသိမ်နှင့် စေတီတော်အား ဖြိုဖျက် နိုင်ရန်အတွက် မဟာသံဃနာယက သြ၀ါဒ ဆရာတော်ကြီးများ အသီးသီးနေထိုင်သော ကျောင်းတော်သို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးနှင့် တရုတ်ပြည်မှ စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူ နှစ်ဦး တို့ ချောင်းပေါက်မတတ်ဝင်ထွက်လျောက်ထားနေသော အကြိမ်ပေါင်း ၁၄ ကြိမ်မျှလောက်ရှိရောက်ရှိကာ လျာက်ထားတင်ပြနေဘူးသည်ဟု သံဃနာယကဆရာတော်ကြီးတပါး ထံမှ သိရသည်။
ဆရာတော်များအနေဖြင့် တားမြစ်ရန် ငြင်းခုံခြင်း လုပ်နေမည်အစား ဦးသာအေးနှင့် အစိုးရဘက်မှဖွဲ့စည်းထားပေးသော သာသနာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ပုဂ္ဂိူလ်များ၏ အစီမံအတိုင်း နောက်ဆုံး တွင် စကားနည်း ရန်စဲဆိုသော ရှေးဟောင်းထုံးနည်းဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စာရေးသူ ရရှိထားသော အချက်လက်များအရ လယ်တီ သိမ်တော်အား ဖျက်သိမ်းဖြိုချရန် အတွက် ၁၈ နာရီမျှ အချိန်သာ ကြာမြင့်မည်ဟု အစီစဉ်ဆွဲထားကြလေသည်။ တနေ့သော မသတ်မှတ်ရသေးသည့် နေ့ရက်တခု၏ ညနေခင်း ၄ နာရီမှ နောက်တနေ့နံနက်ခင်း နံနက် (၈) နာရီတွင် လက်ရှိ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သိမ်တော်နှင့် စေတီတော်မှာ အစရှာမရအောင်ပင် ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်စေနိုင်သော မြေတူးစက် ၀န်ချီစက်ကြီးများ ဖြင့် အပြတ်ရှင်း အမြစ်ဖြုတ်လေပေမည်။
၀မ်ပေါင်နှင့် လက်ရှိ အစိုးရ ဖွတ်တို့၏ သမ္မတ တို့ လောဘဇောတိုက်ပုံများက အံ့မခန်းလိလိပင်တည်း။
ဦးသိန်းစိန်သည်.. မြစ်ဆုံကို မြွေမသေဒုတ်မကျိုး အလည်စီးရိုးတွင် နေပြကာ ပြည်သူများအား မျက်လှည့်ပြလေသော လက်လှည့် နုတ်လှည့် အတည့်မှ ဇောက်ထိုး လုပ်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်သတင်းဌာနမှ မြစ်ဆုံကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခန်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွင် တင်ပြဘူးလေသည်။
ယခု ၀မ်ပေါင်က ဈေးချောင်ချောင်နှင့် ၀င်နိုက်ကာ ခရိုနီ စစ်ပဒေသရာဇ်တသိုက်နှင့် လောဘဇော တိုက်နေကြသည်မှာ ကန်းကုန်နေလေပြီ။
လောဘဟုဆိုရာဝယ်….. ကာမဂုဏ်အာရုံများတွင် အမှားအမှန်ခွဲခြားခြင်း မရှိပဲ မရမကလိုချင်မှု၊ ရပြီးရင်းရလိုရင်း သဘောဖြင့် လိုချင်မှု၊ ရလာသည့် အရာများတွင်လည်း တွယ်တာကပ်ငြိထားလိုမှု သဘောမျိုးကို လောဘဟုဆိုသည်။
ယခု လက်ပံတောင်းဒေသ မြေဧက ၇၀၀၀ထောင်ကျော် တောင်ကြီးတောင်ငယ်ပေါင်း ၃၃ လုံးတို့အား မရမက လိုချင်နေကြလေပြီ။ ထိုတောင်များတွင်မက ထိုတောင်ကြီးများတလျောက်တွင် ရှေ့ယခင်ဆက်ဆက် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြလေသော သာသန အဆောက်အုံ များအား ဖယ်ရှားလိုမှု ဖြိုဖျက်လိုမှု တို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေပြီ။ တရားဝင်ဖျက်ဆီးရန် အခွင့်ရသွားလေပြီ၊ တရားဝင်မှုဆိုသည်မှာ သူတို့ပြုထားသော ကလိမ်ချုံဥပဒေနှင့် သူတို့နှင့် ပေါင်းဖက်နေသော သံဃာဂိုဏ်းချုပ်ကြီး တို့မှ ဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကြည်ညိုကိုင်းရှိုင်းသူများ သံဃာတော်များ၏ သဘောထားဆန္ဒတို့အား မေးမြန်းကောက်ခံခြင်းမရှိပဲ ၄င်းတို့ရေးဆွဲ ချမှတ်ခြင်း ဖြစ်လေ၏။
ဘုရားရုပ်ထု ဘုရားစေတီနှင့် ဘာသာရေးအရ တည်ထားကိုယ်းကွယ်ကြသော ဘာသာရေးအဆောက်အုံတို့အား ဖယ်ရှားခြင်း ပြောင်းရွှေခြင်း ဖြိုဖျက်ခြင်းစသော အကြောင်းများတွင် စီပွါး လဒ်များ မျှော်ကိုး၍ စေတီ သိမ်တော် ဘုရားပုထိုးများ အား ဖျက်ဆီးခြင်း ပြောင်းေ၇ွ့ခြင်းများ မလုပ်ရ မလုပ်အပ်ဟု (မဟာ သုဒ္ဒါရုံအဆုံးဖြတ်၊ စေတိယ ပက္ကာသဏီကျမ်း ) တို့တွင် အတိလင်း ပြဌာန်း တားမြစ်ထားသည်ကို မဟန နှင့် လက်ရှိ အစိုးရတို့ အရှက်ကင်းမဲ့စွာ ချိုးဖေါက်လိုက်ကြသောကြောင့် စာရေးသူမှ အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော ကောသလမင်း အိမ်မက်၏ ပထမဆုံးအချက်ဖြင့် ဥပမာပေးထောက်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
သို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် လက်ထက်က ဇာတ်ထုတ် တစ်ခုအား ပြေးသတိရမိသည်။
ဗိဗ္ဗိသာရမင်းကြီးကမှာ ဘုရားရှင်၏ တကာရင်းဖြစ်နေသောငြားလည်း သားတော် အဇာတသတ်လေးကို ချစ်လွန်းလို့ ဘုံမြင့်ပြဿ်တွေနဲ့ ရှု့မငြီးအောင် နေစေခဲ့သည်…..သို့သော်လဲ လူမိုက်နဲ့ ပေါင်းသင်းမိတဲ့အတွက် မိမိကိုယ်တောင် ပြန်သတ်နိုင်အောင် ချစ်မီးတောက်ခဲ့လေသော အကြောင်း တွေ့ရလေသည်။ ယခုလဲ မဟာသံဃ နာယကမှ တပည့်ဒကါများဖြစ်နေသော ယခင်ကလည်း ဖြစ်နေခဲ့သော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ နှင့် စစ်ဘီလူး စီးပွါးရေး သမား ဦးပိုင်တို့အား မေတ္တာဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့တော်မူမည်သော်လည်း …. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမဟုတ်သော စီးပွါးရေး ကိုသာ ဇောင်းပေး လုပ်ကိုင်နေသည့် ဟန်မျိုးနွယ်လူမိုက်တရုတ် တို့၏ ကုမ္ပဏီနှင့် ပေါင်းကာ တိုင်းပြည်၏ ရှေ့ဟောင်း သမိုင်းဝင် သနာသနိက အဆောက်အုံအား အတိလင်း ဖြိုချပေတော့မည်။
သို့တင်မက စာရေးသူ အခိုင်မာ ဆုပ်ကိုင်မိနေသော ယုံကြည်မှုတခု စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားသည်မှာ…
ယခုတွင်လည်း လယ်တီဆရာတော်ဘုကြီးကိုယ်တိုင် ရေစက်ချ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော လက်ပံတောင်း စေတီတော်မြတ်အား ရွှေပြောင်းခြင်း ၊ ဖြိုဖျက် ဖယ်ရှားခြင်းများ ပြုလုပ်ကြလေတော့မည့် အဓိက အကြောင်းတရားသည် လောဘ ဖြစ်လေသည်။
ထိုဘုရားကြီး၏ အောက်တည့်တည့်တွင် အလွန်အရေးပါသော ရွှေကြောကြီး ရှိနေသည်ဟု တရုတ် ဘူမိဗေဒသမားတို့၏ တွေ့ရှိမှုက အရင်းခံခဲ့၏။ ထိုရွှေကြောကြီးအား တိုက်ရိုက် အလွယ်တကူ ဖောက်ထွင်း တူးဖေါ်နိုင်ရေးအတွက် လက်ရှိအစိုးရနှင့် တရုတ်တို့ ဘာမဆိုလုပ်ကြလေတော့မည်။ ယခင်လည်း သံဃာတော်များအား မီးလောင်ဗုံးဖြင့် လောင်တိုက်သွင်းခဲ့သော နေရာနှင့်လည်း အလှမ်းမဝေးသောနေရာတွင်ရှိနေလေသည်။
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော လယ်တီသိမ်ကျောင်းဖြိုဖျက် ပြောင်းရွေ့ရေးသည် လက်ပံတောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှ အကြံပြုထားသည့် အတိုင်းမဟုတ်သည့်အတွက် အဆိုပါ ကော်မရှင်းတွင်လည်း တာဝန် အတိုင်းတာတခုထိ ၇ှိနေပေသည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော လက်ပံတောင်း ဒေသ စီမံကိန်းနှင့် ရာဇ၀တ်မှု စုံစမ်းရေး ကောက်မရှင်အနေဖြင့် နားလည်သင့်ပေသည်။
သို့သော် နောင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေရှိသည့် အကျိုးဆက်ဟုဆိုနိုင်သော အကြောင်းတရားများအရ ဘကြီးတော် ဘုရားလက်ထက်တွင် ကျော်ဇော် တိကမ အလွန်ရှိပြီး တရားဓမ္မစာပေတွင် အထူးနှံစပ် ကျွမ်းကျင်သော ဆရာတော် ဦးဗုဒ်၏ သံသယာစကားအရဆိုပါလျှင် ကံ ကံ၏အကျိုး အမြဲပင် ရှိပါကြောင်းနှင့် မမြဲသော လက်ရှိခန္ဓာသည် မိမိပြုသော ကံသုံးပါး (ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှံ့လုံး)တို့မှ ထွက်ပေါ်လာသော အရာတို့အား ပြန်လည်သက်ရောက်မှုမှာ ထာဝရ တည်ရှိနေပါကြောင်း နှင့် ဘုရားဖြိုသော အစိုးရအား မိုးကြိုးပစ်ချပါစေသတည်းဟုပင် ကျိမ်စာတိုက်ရပါသည်။
လက်ပံတောင်းဒေသခံများကိုယ်စား…ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးအနေဖြင့်. နေပြည်တော် အာဏာပိုင်များနှင့်…စစ်ပဒေသရာဇ် ဦးပိုင် ကုမ္မဏီ ခေါင်းဆောင်များအား တိုက်ရိုက်ရည်ညွန်းပါသည်။…
အစိုးရနှင့် မဟန ၏ ငြင်းဆိုနိုင်သော အချက်လက်များကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်…..
(မဟာ သုဒ္ဒါရုံအဆုံးဖြတ်၊ စေတိယ ပက္ကာသဏီကျမ်း) ဆိုသော ကျမ်းများ စာအုပ်များအား ဖတ်ရှု့ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်စေချင်ပါသည်။
လယ်တီသိမ်တော် ဖြိုဖျက်ရန် ကလီကမာ လုပ်ခဲ့သော အစိုးရအပေါ်ရေးသားထားသော သတင်းအချက်လက်များအတွက် တာဝန်ယူနိုင်ပါသည်
ကြိုက်သလိုသာာ ဓမ္မဒါန ဝေမျှသည့်အနေဖြင့် အမျိုးသာသနာ တည်တံ့ရေးအတွက် ရှယ်နိုင်ကြပါသည်။
Posted by Myo Lwin Aung at 5:06 AM